Ukufa ngoNovemba, nguGuillermo Galván. Uphononongo | Uncwadi lwangoku
Ukufa ngoNovemba yinoveli yokugqibela ka UGuillermo Galvan. Kwimarike ukususela kumhla wokugqibela we-13, libali lesithathu elineenkwenkwezi umcebisi UCarlos lombardi, emva Ixesha lokucheba y Intombi Enyulu yase amathambo. Kwaye ngokuqinisekileyo kuya kubakho ngaphezulu kuba uGalván ufumene ifomula elungileyo apho idibanisa iploti enomdla, isicwangciso esigqwesileyo kunye nabalinganiswa abaqinileyo. Le yeyam kuhlolwa.
2 Ukufa ngoNovemba
3 Lombardi kunye neMadrid emva kwemfazwe
Umbhali weValencian kunye nentatheli ngomsebenzi omde woncwadi kunye nokuvunywa ngabagxeki kunye nabafundi, kufuneka afumane izihloko zekhredithi ngendlela eyahlukileyo. I-Butterfly Shadows: I-Epic kaLeovigildo, uKumkani weeVisigoths, Phambi kokuba ndivalelise kuwe, Ukusuka eluthuthwini, Ukujonga kukaSaturn, Umoya awushiye mkhondo o Nditsalele uYuda. Ngo-2019 waqala into ngoku eluthotho lweenoveli ezi-3 ezibonisa owayesakuba lipolisa kunye nomcuphi uCarlos Lombardi, ezimzisele impumelelo enkulu.
Ndafika ngo UGuillermo Galvan enkosi umhlobo, owandinika isampuli Intombi Enyulu yase amathambo. Kodwa kuba ndihlala ndiqala uthotho ekuqaleni, ndiye ndayibamba Ixesha lokucheba. Iziphumo: ukuba Ndakhe ndabanjwa yiloo Madrid ukususela ekuqaleni kweminyaka engama-40 ichazwe kakuhle ngabalinganiswa abachazwe kakuhle, kokubini eziphambili nezesekondari, kwisakhiwo esihle kakhulu.
Ngoku, ngefashoni yokuleyibheliza yonke into, le subgenre ibizwa ngokuba ulawulo olupheleleyo Mnyamaoko kukuthi, iinoveli ezinecebo lamapolisa elisekwe kwiJamani yamaNazi (enje ngoBernie Gunther's, UPhilip Kerr), KwiSoviet Union (Arkady Renko, we UMartin Cruz Smith) okanye, kwimeko yaseGalván, iSpeyin kaFranco emva kwemfazwe.
En Intombi Enyulu yase amathambo UGalván wadlulisela isenzo kwidolophu, ngakumbi i-Aranda de Duero, ephuhlisa enye ileyibhile yolu hlobo, leyo ye-noir yasemaphandleni. Kwaye uqhubeke nokugcina ibar engathobiyo kweli bali litsha.
Sikwi eMadrid ukusuka kwi42, Igcwele i-WWII eYurophu kunye nendawo enqabileyo, emnyama kunye nenesidingo sasemva kwemfazwe apha. KUNYE UCarlos lombardi, owayesakuba lipolisa ngoku osebenza kwiarhente yabecuphi yaseHermes, uyabandakanyeka kuphando lwamatyala amabini ngaphandle kobudlelwane obucacileyo: ukunyamalala kommi waseJamani kunye nokufunyanwa kwesidumbu sika intombi erhaxwayo.
Kwangaxeshanye, siyazi ngakumbi ngawe imbali yomntu, ngesiqalo apho owayesakuba ngumfazi wakhe uBegoña ebonakala ecacisa imeko abazifumana bekuyo. Basekhona phandle phaya Iqela elisebenzayo nelithembekileyo Abasebenzisana nabo kunye nomphathi wabo kunye nomhlobo UBalbino Ulloa.
Kwaye kuloo Madrid engwevu ngaphezu kokukhanya akukho kusilela kwi IGestapo, la AbwehrIiarhente zobuntlola zaseBritane kunye nezo ze Pinkerton I-U.S Idibanisa usomashishini othile ukusuka kwiindawo eziphakamileyo kakhulu, kunye nomxhasi weLombardi, oza kutyhila ulwazi oluthe kratya olufanelekileyo njengoko kufanelekile kumcuphi. Kwaye zonke ziyahambelana kwisiqwenga sokudibanisa ukuthengisa ngomzimba, icinema, imarike emnyama kunye nobuntlola, kodwa oyena sigqibo sincinane.
Lombardi kunye neMadrid emva kwemfazwe
Kungenxa yokuba ezinye izinto zobunzima obunzima ezivele kule noveli. eLombardy, ngenxa yemvelaphi yayo egcweleyo ingqumbo kunye nokuzibamba kwangaxeshanye phambi kokuba imeko yelizwe kunye nobomi ngaphezu grey of a Madrid ukhathazwa iziphumo emva kwemfazwe yamakhaya.
Ukhutshiwe kodwa usinde kangangoko anakho kwi- ibhalansi enzima phakathi kwexesha lakhe elidlulileyo emva kwexesha lakhe entolongweni kunye nehorizon ebonakala ngathi iyavuleka ekugqibeleni kwinoveli. Kwaye banjalo amehlo akhe asibonisa ukuba Madrid, kwindawo ebalaseleyo ethi uGalván iphinde ibuye, icace gca ngenxa yokubaliswa okwangoku okusoloko kusizisa isenzo kunye nemifanekiso kufutshane. Umgangatho ongaphezulu kwalowo kuthi angavumelaniyo noko ibali elikhoyo usisonga nge Ukuphathwa kakuhle Nolwimi.
Omnye imbali enyibilikayo oxuba ngobuchule amapolisa, ezembali kunye nobuntlola. Yaye ngokuqinisekileyo kuya kubakho okungakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Usweleke ngo-Novemba, ngu-Guillermo Galván. Uphononongo